छोटकरीमा: आज - २०७७ असोज २३, शुक्रबार
शुक्रबार २,०५९ जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १,००,६७६ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ६०० पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा ७३,०२३ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्।
=> PCR Tests Today: १३,२७९ => Recovered Today: १,६८०
हाल सक्रिय संक्रमित भने २७ हजार ५३ जना छन् । संक्रमित निको हुने दर ७२.५ प्रतिशत रहेको छ ।संस्थागत आइसोलेसनमा ११ हजार एक सय ७६ जना र होम आइसोलेसनमा १५ हजार आठ सय ७७ जना रहेको सरकारले जनाएको छ ।
उपत्यकामा थप १ हजार ४ सय ९ जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । काठमाडौंमा ११ सय १६, ललितपुरमा १६३ र भक्तपुरमा १३० संक्रमित भेटिएका हुन् ।
काेराेना मिटर : कुल संक्रमित संख्या एक लाख नाघ्यो, आज थप दुई हजार ५९ जनामा संक्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकामा १ हजार ४ सय ९ जनामा कोरोना संक्रमण
कोरोना संक्रमित बाहिर हिँडडुल गरेको पाइए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिएको भन्दै संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग चासो राखेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्ने भन्दै समितिले यही असोज २७ गते बैठक बोलाएको छ ।
कृषियाेग्य जमिन कित्ताकाट : छलफल गर्न संसदीय समितिले बोलायो भूमि व्यवस्थामन्त्री र सचिवलाई
धरहराको निर्माण अवधि थपिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २० असोज २०७७ भित्र धरहराको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग २०७५ मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसलगत्तै रमन कन्स्ट्रक्सनले २०७५ कात्तिकदेखि निर्माण सुरु गरेको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सिहंदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री भट्टराई र राजदूत क्वात्राबीच दुई देशबीचको हवाई, पर्यटन तथा संस्कृतिबारे कुराकानी भएको थियो ।
राप्रपाले २५ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्न माग गरेको छ । अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको बिहीबार बसेको बैठकले डा. केसीको जीवन रक्षार्थ आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ताटोलीबीच आज (बिहीबार) सिंहदरबारमा वार्ता भइरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारी वार्ताटोली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच आज वार्ता भइरहेको हो ।
डा. केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच सिंहदरबारमा वार्ता सुरु
चेल्सीका ओलिभियर जिरुड फ्रान्सका लागि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने दोस्रो खेलाडी भएका छन् । यस क्रममा उनले मिचेल प्लाटिनीलाई उछिनेका छन् ।
जिरुडले उछिने प्लाटिनीलाई
कोरोना भाइरसको संक्रमणको उच्चवृद्धिकै बाबजुत खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ६ करोड रुपैयाँबराबरका खसी, बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने भएको छ ।
संस्थानले करिब तीन हजार खसी, बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने भएको हो । काठमाडौं उपत्यकालाई लक्षित गरी सो खसी, बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने प्रस्ताव संस्थानले गरेको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई खुला आवेदनबाट विश्वस्तरीय प्रशिक्षक छान्न सबै पक्षबाट सुझाब आएपछि क्यानले प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ ।
दरखास्त दिने मिति सकिएको छ । तर, अहिलेसम्म को–कसले दरखास्त दिएको सर्वाजनिक भने गरिएको छैन ।
क्रिकेट प्रशिक्षक छनोट प्रक्रिया : कस्तो प्रशिक्षक चाहिने हो नेपाली क्रिकेटका लागि ?
अमेरिकी राष्ट्रपतीय बहसका लागि अनिच्छुक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी र्‍यालीका लागि भने तयार रहेको बताएका छन् ।
गत शुक्रबार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका ट्रम्पले एक हप्ता नहुँदै बिहीबार आफूलाई पूर्ण स्वास्थ्यलाभ भइसकेकाले र्‍यालीमा सहभागी हुन सक्षम रहेको दाबी गरेका हुन् ।
संक्रमित भएको एक हप्तामै चुनावी र्‍यालीका लागि सक्षम भएको ट्रम्पकाे दाबी
यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) लाई दिइने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले भोकलाई परास्त गर्न गरेको प्रयास र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि गरेको पहलका लागि सो पुरस्कार प्रदान गरिएको नोबेल कमिटीले जनाएको छ।
बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं भारतीय राजनीतिका चर्चित नेता लालुप्रसाद यादवलाई झारखण्ड उच्च अदालतले शुक्रबार एउटा मुद्दामा जमानत दिएको छ ।
चारा घोटालासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा उनलाई जमानत दिएको अदालतले जनाएको छ ।
लालु यादवले पाए जमानत, बिहारको चुनावी राजनीतिमा तरंग
एक बेल्जियमी घुमन्तेलाई गैरकाननी काममा लगाएर मृत्यु भएको मुद्दामा एक अस्ट्रेलियाली रोजगारदाता दोषी ठहरिएका छन् ।
ती मृत्यु भएका बेल्जियमी घुमन्तेलाई अस्ट्रेलियाको एक कृषि उद्योगले फलफूल टिप्ने काममा लगाएको थियो । त्यस क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो ।
जापानले आगामी नोभेम्बरदेखि १२ देशबाट आउन चाहनेहरूलाई यात्रा अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।कोरोनाको महामारी फैलिँदै गएकाले बन्द गरिएको यात्रा अनुमतिलाई खुला गरेर सरकारले ती देशहरूबाट आउन दिने योजना बनाएको हो ।
जापानले अनुमति खुला गर्न लागेका देशहरुमा इन्डोनेसिया, चीन, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, मलेसिया, ताइवानलगायत रहेका छन् ।
जापानले अर्को नोभेम्बरबाट मात्रै यात्रा अनुमति दिने
नेपालीहरूका लागि रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने मुलुक दक्षिण कोरियामा १५ लाख बढी मजदुरले आफूले काम गरेवापत पाउनुपर्ने तलब रोजगारदाताबाट पाउन नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
यहाँको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म १५ लाखभन्दा धेरै कामदारले नपाएको कुल तलब रकम ७‍.१७ ट्रिलियन बाेन पुगेको छ ।